Kutumira Motokari Kubva Kuwait kuenda kuUK | Yangu Mota Kunze
Maitiro ekutumira mota kubva kuKuwait kuenda kuUK inovhara nzvimbo dzakasiyana siyana, nekudaro zvinopesana nekuyedza kutaurirana nezvechiitiko chega, zvinokurudzirwa zvikuru kusarudza nyanzvi vane ruzivo mumunda kuti vaone kuti zvese zvinorongeka. PaMotokari Yangu Kunze tine ruzivo rwakakura mukutakura kubva kuKuwait, zvichitevera maitiro akatsanangurwa pazasi.
Kunyoreswa Kunyoreswa Kwemotokari muKuwait
Chikamu chekutanga panguva yekutumira mota yako kubva kuKuwait kuenda kuUK kunosanganisira iwe kubhadhara kushanyira kuRTA yemuno kunyorera ako ekunze mahwendefa uye nekudaro unyorese mota. Iyi ndiyo nzira yakatwasuka yekushandisa uye inozogonesa vamiririri vedu kutora kuendesa kwemota yakagadzirira kurodha mumudziyo.
Kurodha kweMotokari & Kutumira
Isu tinoshandisa vedu vamiririri muKuwait vanozotora mota yako kubva kwauri, vakananga kumudziyo unozotakurwa mungarava. Uine makore mazhinji echiitiko mumunda, unogona kuisa chivimbo chako mavari kuti vachengete mota yako usati wanyatsoomerera munzvimbo saka hapana kufamba panguva yekufamba.
Kuti uwanezve rugare rwepfungwa sezvo isu tichinyatso kuziva mari yauchange waisa mumotokari yako, tinopa inishuwarenzi yekufambisa kana uchida kuitenga. Izvi zvinodzivirira mota kusvika kune iyo yekutsiva kukosha kwenguva yenguva yerwendo.
Sezvo nezvinhu zvakawanda zvinouya kuUK, kune mitero yekunze iriko. Nekudaro, kana iwe uri kuenda kuUK zvachose uye iwe unozokwanisa kuunza mota yako pamusoro zvachose isina muripo wemutero. Unofanirwa kunge wakagara kunze kweEU kwemwedzi inodarika gumi nemaviri asi uye uine mota kwemwedzi mitanhatu isati yatumirwa kunze. Iwe haugone kutengesa mota yako kuUK kune imwezve 12-mwedzi nguva.
Kune mota dzinenge dzichangotengwa kana kana usati wararama kunze kweEU kwenguva yakatsanangurwa, uchafanirwa kubhadhara mutero wekupinza neVAT zvichibva nemari yawakabhadhara mota. Imotokari yakavakwa muEU inoiswa kune imwechete-kubva £ 50 mutero uye 20% VAT apo mota yakavakwa kunze kweEU uchafanira kubhadhara 10% basa uye 20% VAT.
Kune mota dzekare uye chero mota inopfuura makore makumi matatu ekuberekwa, iwe unozokodzera iyo yakaderedzwa mwero wekunze mutero uye VAT pa30% chete sekureba sekunge zvimiro zviripo zvasangana.
Kuedza & Kugadziridza Mberi kweDVLA Kunyoresa
Sezvauri kuunza mota yako kubva kuKuwait, pachave nemisiyano pakati pekukodzera kwayo kwemigwagwa yeKuwaiti neiya iri kuUK. Izvi zvinoreva kuti huwandu hwekushandurwa uye bvunzo zvinodikanwa DVLA isati yabvumidza kunyoreswa.
Zvimwe zvezvakanyanya kugadziridzwa zvatinoita kuGulf-spec mota ndezvekugadzirisa maratidziro emwenje kuti asangane nedanda patani zvinodiwa, chinja chinomhanyisa kumhanya kusvika mph uye nekuisa mwenje wemberi yemwenje kana imwe isina kukodzerwa seyakajairwa.
Mota dziri pasi pemakore gumi dzinodiwa kuti dziongororwe IVA uye, semutengesi chete muUK kuva neyedu pasaiti, yakatenderwa nzira yekuyedza yeIVA yemotokari dzevanofamba, tinogona kuita izvi nekukurumidza kupfuura nzvimbo dzinomirirwa neHurumende. kwanisa.
Kana mota yakura, MOT bvunzo inodikanwa kusiyana neIVA bvunzo, iyo yatinozoongorora kukosha kwayo munzira uye nekuita chero shanduko inodiwa.
Kunyoresa & Nhamba Mahwendefa
Mushure mekubudirira kupasa bvunzo uye kupedzisa zvese zvakagadziridzwa, yedu yega DVLA Account Manager, inongowanikwa kune My Car Import vatengi, ichagadzirisa kunyoreswa kwemotokari yako nekukurumidza kupfuura nzira yechinyakare.
Pakubvumidzwa, isu tinogona ipapo kukodzera yako nyowani UK manhamba mahwendefa uye kukuzivisa iwe kuti mota ikozvino yave kubvumidzwa zviri pamutemo kuendeswa mumigwagwa yeUK. Tichazoronga newe nguva yekutora kana kuronga kuti mota yako iendeswe yakananga kumusuwo wako.
Kana iwe uchida kuti timu yedu ine ruzivo kuti itore kutonga kweichi chiitiko chekutumira mota yako kubva kuKuwait kuenda kuUK, ingotipa kufona nhasi pa +44 (0) 1332 81 0442.